Nhọrọ ndị ọzọ na Microsoft Office | Akụkọ akụrụngwa
Free uzo ozo ka Microsoft Office
Kemgbe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nsụgharị mbụ ya, afọ 31 gara aga, Microsoft Office aghọwo nke zuru oke Akwụkwọ na ụwa nke kọmputa mgbe ị na-eke ụdị akwụkwọ ọ bụla, ọ bụrụ akwụkwọ ederede, akwụkwọ ma ọ bụ ngosi. Ruo afọ ole na ole ugbu a, naanị otu ụzọ iji ya bụ site na ndenye aha.
Ọ bụrụ na anyị enyochatụ ntanetị, anyị nwere ike ịnweta ikikere otu afọ iji Office 365 maka euro ole na ole. Agbanyeghị, ọ bụrụ na mkpa gị adịghị agafe ọtụtụ ọnụọgụ nhọrọ nke Office na-eme ka anyị dị anyị site na ngwa ngwa ya, n'okpuru anyị na-egosi gị ihe kacha mma n'efu na Microsoft Office.
N'agbanyeghị ihe ọrụ anyị ga-abụ, o yikarịrị ka anyị na-echekwa faịlụ anyị niile na igwe ojii, ọ bụrụ Google, Apple, Microsoft ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ. Inwe ike idezi faịlụ ozugbo site na igwe ojii na-enweghị ibudata ha na ngwaọrụ anyị bụ otu n'ime ọrụ ndị dị mkpa onye ọ bụla kwesịrị inye enye kacha egosipụta ọrụ.
Office 365 dabere n'echiche ahụ, ebe ọ bụ na ikikere ya anaghị enye anyị ohere iji ngwa ya n'ịntanetị, ma ọ bụ nsụgharị ndị ebudatara na kọmputa anyị, kamakwa na-enye anyị ohere nchekwa dị nnọọ elu karịa ihe ọ na-enye anyị na akaụntụ Microsoft dị mfe, 5 mwute GB.
Tupu ịchọọ ihe ọzọ na Microsoft Office, kwa anyị ga-eleba anya na ụdị ikpo okwu anyị chọrọ iji ya, ebe ọ bụ na ọ dabere na nke, anyị nwere anyị nwere otu ma ọ bụ ndị ọzọ nhọrọ, ha niile fọrọ hà dokwara, ọ bụ ezie na mgbe ụfọdụ ha na-nnọọ iche.
1.1 Dakọtara na desktọọpụ na nyiwe niile
2 Peeji, Onu ogugu, na Isi Okwu
2.1 Kwekọrọ n'Ozizi na MacOS na mgbakwunye na iOS
3.1 Dakọtara na nyiwe desktọọpụ niile
4 Office WPS
4.1 Dakọtara na desktọọpụ na nyiwe niile
5.1 Dakọtara na nyiwe desktọọpụ niile
6 Kedu nke kachasị mma?
Dakọtara na desktọọpụ na nyiwe niile
Y’oburu n’achoghi ime ka ndu gi tinye na nbudata ngwa nke igaghi eji na komputa gi, ihe kacha mma anyi nwere bu ihe a na akpo Google Docs, ulo oru Google nke putara uzo abuo: ọ dịghị mkpa ịwụnye na kọmputa anyị (ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịrụ ọrụ ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịrụ ọrụ na-enweghị njikọ ịntanetị), ebe ọ na-agba ọsọ site na ihe nchọgharị anyị (ọ bụrụ na ọ bụ Google Chrome ka mma) ọ bụ otu n'ime mfe na ahịadị ka ọnụ ọgụgụ nke nhọrọ dị oke.
Akwụkwọ, Akwụkwọ na Ihe nkiri bụ aha ndị ọzọ na Okwu, Excel na Powerpoint nke Google na-enye anyị. Iji nweta echiche ọnụọgụ nke nhọrọ Google Docs na-enye anyị, anyị nwere ike ịsị na ngwa ahụ Windows WordPad na-enye anyị ihe dịka ọrụ dịka Docs, ikekwe nke ikpeazụ ahụ gụnyere ụfọdụ ndị ọzọ.
Ebumnuche Google maka ndị ọrụ niile chọrọ ngwa iji mepụta akwụkwọ ederede, akwụkwọ ntanetị ma ọ bụ ihe ngosi kwa oge. Ihe dị mma bụ na ọ bụ free na multiplatform, yabụ anyị nwere ike ịnweta ma mepụta ọdịnaya site na ngwaọrụ ọ bụla, ma ọ bụ mkpanaka ma ọ bụ desktọọpụ.
Kwekọrọ n'Ozizi na MacOS na mgbakwunye na iOS
Apple na-enye anyị Office ya, nke ana-akpọbu iWork, sọftụwia mejupụtara Peeji, Ọnụọgụ na Isi Okwu nke kwekọrọ na Okwu, Excel na Powerpoint n’otu n’otu. Ọ bụ eziokwu na ọnụọgụ nhọrọ dị ọ bụghị dị ka OfficeKa afọ na-aga, ọnụ ọgụgụ ahụ na-abawanye ma taa, ọ bụ ihe ọzọ dị irè karịa n'efu maka ndị ọrụ nke ngwaahịa Apple.
Peeji, Ọnụ Ọgụgụ na Isi Okwu, dịkwa na iOS ma a na-echekwa faịlụ niile na igwe ojii, yabụ anyị nwere ike gaa n'ihu na -emepụta akwụkwọ ebe anyị hapụrụ iPhone, iPad ma ọ bụ Mac. Applelọ Apple a, maka ihe doro anya, dị maka ngwaahịa Apple, yabụ ọ bụrụ na ịnweghị Mac, ị nwere ike ichefu ya. Mana ọ bụrụ na inwere ya, ọ kachasị mma ọzọ dị ugbu a na ahịa.
Dakọtara na nyiwe desktọọpụ niile
Openoffice ọ dị maka Windows na Mac na Linux. Ọ nọ n'okpuru nche anwụ nke Oracle na Sun Microsystem, n'ihi ya, anyị anaghị ekwu maka sọftụwia dị ala. Behind OpenOffice anyị na-ahụ ngwa atọ ndị kwekọrọ na Okwu, Excel na Powerpoint, yana ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ọrụ yana ndakọrịta na usoro eji Microsoft na akwụkwọ gị.
Naanị naanị nke anyị hụrụ na sọftụwia a bụ na agbanyeghị inwe ike mepee ederede ederede, akwụkwọ ntanetị na ngosipụta Office, ị nweghị ike ibupụ faịlụ na ụdị ndị ahụ.
Ebe ọzọ a na-enye dị ka ihe ọzọ na Office dị na ya Office WPS, ngwa ngwa nke sitere na Asia, nke obere nke nta jisiri ike nweta ọnọdụ n'ahịa. A mụrụ ọrụ a dị ka Kingsoft Office na 1988, ya mere bụ otu n'ime ndị kasị ochie na anyị nwere ike ịchọta ugbu a n'ahịa.
Onye edemede, Akwụkwọ edemede na ihe ngosi, dakọtara na Okwu, Excel na Powerpoint nke WPS OFfice na-enye anyị. Enwere ụlọ a n'efu maka nbudata. Anyị nwekwara nsụgharị a na-akwụ ụgwọ nwere ọtụtụ ọrụ, mana maka ọtụtụ ndị ọrụ, ụdị nke bụ ihe zuru oke. WPS Office dị na Windows, macOS, Linux, iOS, na Android.
Anyị gụchara nchịkọta nke ndị ọzọ na - akwụ ụgwọ na Microsoft Office FreeOffice, otu n'ime uzo ozo kacha ewu ewu n'etiti ndị ọrụ kpebiri ọtụtụ afọ gara aga iji kpochapụ ụlọ Microsoft kpamkpam. N'adịghị ka Microsoft Office, LibreOffice mejupụtara ngwa dị iche iche iji mepụta faịlụ dị iche iche, ma ha bụ akwụkwọ ederede (Onye edemede), spreadsheets (Calc), mepụta ma dezie usoro mgbakọ na mwepụ (Math), Dezie vector ndịna (Bịaruo) ma ọ bụ ọdụ data site na Base.
Thedị nke Libreoffice ji mee ihe bụ ODF, usoro nke ị nwere ike ị gafere site n’oge ruo n’oge. O sina dị, bụ 100% dakọtara na ugbu a na ihe nketa Microsoft formats, ya mere ndakọrịta karịrị nkwa. Naanị mana anyị hụrụ na LibreOffice bụ na ọ dị naanị maka Windows, macOS na Linux, enweghị nyiwe mkpanaka.
Kedu nke kachasị mma?
N'otu aka ahụ ọ dabere na sistemụ arụmọrụ anyị ji. Ọ bụrụ na anyị ejiri macOS, nhọrọ kachasị mma, dịka m kwuru bụ Apple's Pages, Numbers and Key. Ọ bụrụ na anyị na-achọ ndakọrịta nhọrọ kachasị mma bụ LibreOffice. Mana ọ bụrụ na ihe anyị na-achọ bụ multiplatform, Google Docs bụ nyiwe na-enye anyị ọtụtụ nhọrọ.
A ghaghi iburu n'uche ya n'oge niile ọ dịghị otu n'ime ngwa ndị a dị oke ma ọ bụ na anyị enweghị ike ịhapụ otu ihe ahụ dị ka Office, site na nke a anaghị m ekwu itinye obi ike, njikọ, tebụl na ihe ndị dị otú ahụ. Maka onye ọrụ oge niile ha bụ nhọrọ dị oke mma, mana ọ bụghị maka nnukwu ụlọ ọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Aplicaciones » Free uzo ozo ka Microsoft Office
Ọgwụgwụ nke nkwado maka Windows 7 Gịnị ka m nwere ike ịme?